Famerenana sy famakafakana ny Tablet Teclast X10 HD 3G | Androidsis
Miverina izahay miaraka amin'ny hevitra momba ny terminal Android tsara indrindra, amin'ity tranga ity, miaraka amin'ny ny famerenana sy famakafakana ny Tablet Teclast X10 HD 3G, DualBoot iray manontolo izay azontsika atao mihoatra ny 200 euro fotsiny eo am-pelatanantsika ny tsara indrindra amin'ny Windows sy ny tsara indrindra amin'ny Android manapa-kevitra amin'ny fotoana rehetra amin'ny rafitra fiasa hidirana.
Ity iray ity Tablette Teclast X10 HD 3GIzy io dia miaraka amina processeur Intel 2,16 Ghz quad-core mahery izay namboarina manokana ho fanatanterahana amin'ny ambaratonga avo indrindra ao amin'ny Windows 8.1 izay misy Tablet iray misy fika manokana momba ny tablette avo lenta. Izany rehetra izany dia miaraka amin'ny fahazoana manana rafitra miasa roa miasa tanteraka, amin'ny lafiny iray Windows 8.1 tena izy azo averina amin'ny Windows 10 ary amin'ny lafiny iray Android 4.4.4 Kit Kat, ataovy manaitra ny sandan'ny volan'ity vola ity DualBoot Tablet ho tena tsy mety resy, ary vao mainka aza miaraka amin'ny efijery kalitaon'ny retina amin'ny famahana ny zavatra tsy misy ary tsy latsa-danja 2560 x 1600 pika sa inona ilay fanapaha-kevitra mitovy WQXGA.
1 Famaritana ara-teknika feno momba ny Teclast X10 HD 3G Tablet
2 Ny tsara indrindra amin'ny Teclast X10 HD 3G
3 Ny ratsy indrindra amin'ny Teclast X10 HD 3G
Famaritana ara-teknika feno momba ny Teclast X10 HD 3G Tablet
modely T-Pad X10 HD 3G
SW Android 4.4.4 Kit Kat sy Windows 8.1 azo havaozina amin'ny Windows 10
efijery 10'1 "IPS miaraka amina vahaolana WQXGA 2560 x 1600 pixel ary tohana multitouch 10-point
processeur Intel Z3736F quad-core 2'16 Ghz
Rom 64 Gb miaraka amin'ny fanohanan'ny karatra MicroSD
Conectividad Tambajotra GSM + WCDMA: GSM 850/900/1800 / 1900MHz WCDMA 2100MHz - HDMI - Wifi - Bluetooth - GPS ary aGPS - OTG
Fomba hafa DualBoot Android / Windows - Fifandraisana 3G ho an'ny angona sy ny mety hisian'ny antso - Output HDMI ho an'ny fifandraisana mora amin'ny efijery na fahitalavitra.
lafiny 25'7 x 16'2 x 0 cmts
lanja Gramin'ny 573
bateria 8000 mAh lithium-ion
vidiny 211'21 Euros
Ny tsara indrindra amin'ny Teclast X10 HD 3G
Tsy misy isalasalana fa, ankoatry ny goavambe sy tsy isalasalana tahan'ny kalitao / vidiny, eo alohan'ny takelaka Android iray izay ahitantsika ny fanomezana lehibe indrindra na ny endri-javatra asongadiny dia ny fiasa goavambe izay Rafitra fanombohana DualBoot, avy amin'izany, rehefa manomboka ny Tablet, dia ho afaka hisafidy ny rafitra fiasa mifanaraka amin'ny zavatra ilaintsika amin'izany fotoana izany isika.
Etsy ankilany, tena ilaina ny manasongadina ny famahana ny efijery goavambe, ary izany dia miatrika takelaka misy takelaka misy Vahaolana WQXGA, na inona no lasa mitovy 2560 x 1600 pika izay mahatonga azy io ho tsara ho an'ny asa sy hankafy ny atiny multimedia toa ny sarinay, horonan-tsary na horonan-tsary You Tube misy vahaolana avo lenta. Sarimihetsika misy Teknolojia IPS sy fanohanana multitouch 10 isa tsy misy zavatra tokony hialona ny Takelaka amin'ny marika Android hafa izay misy vidiny telo aza.
Etsy ankilany, lafiny iray hafa hanasongadinana ny fahaizan'ny bateria mitambatra izay tsy misy mihoatra ary tsy ambany noho izany 8000 mAh fahafaha-manao, manolotra fahaleovan-tena mihoatra ny 8 ora ny fampiasana efijery mitohy.
Farany dia ilaina ny manonona ny fanohanana ireo tambajotra 3G amin'ny alàlan'ny MicroSIM zavatra hahafahantsika mampiditra karatra telefaona iray izay ankoatry ny afaka mifandray na aiza na aiza misy antsika, dia hanome antsika ny fahafahan'ny fifandraisana an-telefaona ihany koa amin'ny firesahana satria manana Dialer izy ary fahaizana manao sy mandray antso an-tariby an-telefaona.
Ny ratsy indrindra amin'ny Teclast X10 HD 3G
Araka ny mahazatra dia matetika isika no manasongadina zavatra ratsy manoloana ireo fantsona voadinika eto Androidsis, izay tena sarotra amin'ity indray mitoraka ity, ny hany zavatra tonga tao amiko mba hanasongadinana ho lafiny ratsy dia ny isan'ny rindranasa sinoa izay efa napetraka mialoha tamin'ny fizarazarana Android, rindranasa sasany izay tsy avela hongotantsika raha tsy miorim-paka amin'ny Tablet izahay ary ny vahaolana tokana ananantsika dia ny miditra amin'ny Settings / fampiharana ary hametraka azy ireo hibernate.
Efijery IPS QWXGA
2,16 Ghz Intel processeur
Fampiharana sinoa maro no efa napetraka mialoha amin'ny Android
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Izay rehetra atolotry ny Tablet Teclast X10 HD 3G ho antsika, DualBoot iray manontolo mihoatra ny 200 euro
Ho an'ny vidiny kely kokoa, ny x98 pro dia avy amina mpanamboatra iray ihany, miaraka amin'ny famahana kely kokoa ary tsy misy fanangonana angon-drakitra (izay tsy anisany tantara an-tsary koa). Ho setrin'izany dia manana W10 sy Android 5 izahay, Intel X5 - Z8500 processeur, 4 RAM,….
Manana izany mandritra ny 6 volana aho ary faly. Ny processeur dia ampy amin'ny asa iraisana rehetra. Mampiasa Photoshop, Office sns aho rehetra tsy misy olana.
Mifanohitra amin'izany, manana kilema famokarana roa izy io toy ny hoe ny bateria, izay misy sela roa, dia iray ihany no eken'ny rafitra. Midika izany fa manana fahaleovan-tena mandritra ny adiny roa isika mandra-pijanon'ilay mari-pamantarana amin'ny bateria 7% ary maharitra 7 ora ity 7 ity.
Misy ihany koa ireo olona izay nitatitra bibikely ao amin'ny Playstore izay efa misy Fix.
Ary amin'ny Android dia misy lesoka amin'ny mari-pana mipoitra tsindraindray izay mampihena ny famirapiratana
Ho ahy, na dia misy lesoka aza, ekipa tsara.
Mamela anao misy horonan-tsary mifandraika amin'ilay takelaka.
Esory ny boaty Teclast X10HD 3G:
PS: Nohavaozina tamin'ny Windows 10 Maimaimpoana ary tsy misy olana rehefa mametraka
Nanao ny andrana antutu ary nanamafy fa izy ireo dia 2,16 Ghz
Miseho ny sary tena izy voalohany an'ny HTC One A9